Shiinaha Ffp3 Neefsade, Warshadda Neefsashada P3 - Gubang
Soo bandhig alaabooyinka
Intaa waxaa sii dheer, iyadoo lagu saleynayo fikradaha suuban ee akhlaaqda wanaagsan, yirentang waxay sameynaysay tabo cusub waxayna si joogto ah u sahaminaysay wax soo saar tayo sare leh iyo maaskaro caafimaad leh, taasoo horseedaysa isbedelka moodada caafimaadka leh kuna dadaalaysa inay abuurto caafimaad ..
Weydiimaha ku saabsan alaabtayada ama liiska qiimaha, fadlan noo dhaaf e-maylkaaga waxaanan kula soo xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.
Tan iyo markii la aasaasay, Yirentang waxaa ka go'an sababta daryeelka iyo kalgacalka kalgacalka leh iyadoo la raacayo mabaadi'da ganacsi ee "maskaxda lagu hayo wanaaga iyo naxariista, kobcinta jirka, iyo ku-dhaqanka wanaagga". Maaskarada KS-9005 ee ay soo saartay Yirentang ayaa ka gudubtay dhammaan imtixaannadii GB2626-2006, GB2626-2019 iyo heerka EU ee EN149: 2001 + A1: 2009. Shahaadada CE ayaa la soo saaray waxaana cadeeyay SGS iyo ISO-9001-2015 ..
Dhawaan, dhammaantayo waxaan iibsaneynaa waji dabool. Waxaan ku soo aruurinay macluumaad halkan Farqiga u dhexeeya maaskarada difaaca caafimaadka, maaskarada N95 iyo maaskarada KN95 1. Maaskarada kahortaga caafimaadka: iyadoo la jaanqaadeysa Shiinaha GB 19083-2010 heerka qasabka ah, waxtarka sifaynta ≥ 95% (oo lagu tijaabiyay waxyaabo aan saliid lahayn). Waa dib ...
In kasta oo cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus epidemic' la bilaabay, haddana mas'uuliyiinta xeerarka suuqa iyo ururada macaamiisha ee dhammaan heerarka kala duwan waxay ku baaqeen daacadnimo ganacsi iyo maareynta sharciga u hoggaansan. Si kastaba ha noqotee, weli waxaa jira ganacsiyo badan oo aan damiir lahayn oo ka soo horjeeda dabaysha oo iibiya waji been abuur ah si ay u qaataan ...